Nijgadh.com – Page5– Nijgadh Fast Track News, Airport News and Latest News of Nijgadh Bara Parsa Rauthat & Middle Terai Region of Nepal::: Nijgadh.com Nijgadh Samachar Bara First online News
२०७४, २४ मंसिर आईतवार ०७:५४ December 10, 2017 Nijgadh.com Comments
145 Viewsबारा क्षेत्र नम्बर १ (क) मा बाम गठबन्धनका एमाले नेता त्रिलोकी चौधरी करिब १९०० मतान्तरसहित बिजयी भएका छन तर घोषणा हुन बाकी । त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा बामका अच्युत मैनाली र काङ्ग्रेस का उमकान्त चौधरीको लगभग ४०० को मतअन्तर रहेको छ । अहिलेसम्म बाम गठबन्धनका तीन, संघीय समाजवादी फोरमका एक गरि चार उम्मेदवार प्रदेश सभामा […]
२०७४, २४ मंसिर आईतवार ००:२१ December 10, 2017 Nijgadh.com Comments
104 Viewsबारा निर्वाचन क्षेत्र न-:१ कोबिहान ६ बजे सम्मको ताजा मतपरिणाम-: अच्युत मैनाली (बाम -सुर्य) = १४६०३ उमाकान्त चौधरी (लोक-रुख) = १४२२४ #बामअग्रता = ३७९ =——-*——-*——-*——-*——- बारा निर्वाचन क्षेत्र न:-१ (क) प्रदेश तर्फको मतपरिणाम-: त्रीलोकी चौधरी (बाम.)सुर्य = १०९९८ पेमासिद्दी लामा (लोक.),रुख = ९१५० #बामअग्रता = १८४८
२०७४, २३ मंसिर शनिबार १६:२९ December 9, 2017 Nijgadh.com Comments
150 Viewsसाझ सम्म बाराको कलैयामा मत गनिरहदा बारा क्षेत्र नम्बर १ प्रतिनिधि सभातर्फ अच्युत मैनाली ( बाम गठबन्धका एमालेले) १२२७८ मतका साथ रहनुभएको छ भने उमाकान्त चौधरी (नेपाली कांग्रेस) ११७२७ हुनुहुन्छ । मत परिणाम गन्दै गर्दा एमाले र काङ्ग्रेस दुबैलाई डेन्जर जोनमा राखिएको छ यसको मतलब अब राजपा उकालो लाग्ने सम्भावना बढी छ ।
२०७४, २३ मंसिर शनिबार १२:५६ December 9, 2017 Nijgadh.com Comments
94 Views साझ सम्म बाराको कलैयामा मत गनिरहदा बारा क्षेत्र नम्बर १ प्रतिनिधि सभातर्फ उमाकान्त चौधरी (नेपाली कांग्रेस) ९८६८ अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ । अच्युत मैनाली ( बाम गठबन्धका एमालेले) ९८६१ मतका साथ पछ्याई रहनुभएको छ । त्यसैगरी रामकिशोर प्रसाद यादव (राजपा) १४०५ मतका साथ तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ भने सन्नी लामाले ११३ मत ल्याएका छन । […]
बारा क्षेत्र नं १को भर्खरै १२:३०को अपडेट यस्तो छ
२०७४, २३ मंसिर शनिबार ०६:५० December 9, 2017 Nijgadh.com Comments
86 Viewsबारा क्षेत्र नम्बर १ प्रतिनिधि सभातर्फ उमाकान्त चौधरी (नेपाली कांग्रेस) ७२४७ अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ । अच्युत मैनाली ( बाम – एमाले) ७११८ मतका साथ पछ्याई रहनुभएको छ । त्यसैगरी रामकिशोर प्रसाद यादव (राजपा) ११६० मतका साथ तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ ।
२०७४, २३ मंसिर शनिबार ०४:१० December 9, 2017 Nijgadh.com Comments
196 Viewsबारा क्षेत्र नम्बर १ प्रतिनिधि सभातर्फ अच्युत मैनाली (एमाले) ५८३४ अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ । उमाकान्त चौधरी (नेपाली कांग्रेस) ५७४१ मतका साथ पछ्याई रहनुभएको छ । त्यसैगरी रामकिशोर प्रसाद यादव (राजपा) १०९७ मतका साथ तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ । सन्नी लामा ( विवेकशिल साझा) ७१ मतका साथ चौथो स्थानमा हुनु हुन्छ । अन्य थप अपडेट हेर्न Nijgadh.com […]
२०७४, २३ मंसिर शनिबार ०२:४४ December 9, 2017 Nijgadh.com Comments
113 Viewsबारा क्षेत्र नम्बर १ प्रतिनिधि सभातर्फ उमाकान्त चौधरी (नेपाली कांग्रेस) ४१६४ अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ । अच्युत मैनाली (एमाले) ३९७० मतका साथ पछ्याई रहनुभएको छ । त्यसैगरी रामकिशोर प्रसाद यादव (राजपा) १०६३ मतका साथ तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ । बारा क्षेत्र नम्बर २ प्रतिनिधि सभातर्फ रामसहाय यादव (संघिय समाजवादि फोरम) ४३४३ मतका साथ अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ […]
75 Viewsबाराको निर्वाचन क्षेत्र नं १मा बाम गठबन्धनका उम्मेदवारले अग्रता बनाएका छन । क्षेत्र नम्बर १ मा एमालेका अच्युत मैनालीले २९९० मत पाएका छन भने नेपाली काग्रेशका उमाकान्त चौधरीको २६७१ मत राजपाका रामकिशोर यादवले ५९७ मत पाएका छन । त्यसैगरी क्षेत्र नं. २ मा भने संघीय समाजवादी फोरमका रामसहाय यादवले अग्रता बनाएका छन । उनले […]
२०७४, २२ मंसिर शुक्रबार १६:०२ December 8, 2017 Nijgadh.com Comments
114 Viewsबारा २२ मङ्सिर: बारा क्षेत्र नं १ मा बाम गठबन्दनका उम्मेदवार अचुत मैनालीले शुरुवाति अग्रता लिएका छन्। दोस्रोमा काङ्ग्रेसका उमकान्त चौधरी छन भने राजपाले पछ्याईरहेकोछ । निजगढ ३,६,८, ११ र कोल्हबी नपाको ११ र ७ को मतगणना सकिएको छ भने अन्य ठाउमा मतगणना जारी छ । त्यस्तै क्षेत्र नम्बर १ प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत बाम (एमाले)को […]
२०७४, २१ मंसिर बिहीबार १५:२५ December 7, 2017 Nijgadh.com Comments
100 Views गोरखा : चर्चामा रहेको गोरखा क्षेत्र नम्बर २ को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक भएको छ । नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराई माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्दा ३३ मतले पछाडि छन्। निर्वाचन आयोगले दिएको पहिलो मतपरिणामको नतिजा अनुसार बाबुरामले १३२ मत ल्याएका छन् भने नारायणकाजीले १६५ मत प्राप्त गरेका छन् । थप मत परिणाम […]
२०७४, २१ मंसिर बिहीबार १४:२५ December 7, 2017 Nijgadh.com Comments
109 Viewsकाठमाडौं- पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका जिल्लाहरुमा साँझ पाँच बजेदेखिनै मतगणना हुँदैछ। पहिलो चरणमा ३२ जिल्लाका ३७ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका ७४ क्षेत्रमा मंसिर १० गते निर्वाचन भएको थियो। दोस्रो चरणको मतदान सकिए लगत्तै प्राय जिल्लाको मतगणना गर्ने तयारी गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएकोछ। सर्वदलीय बैठक बसेर मतगणनालाई अघि बढाउन दलहरु लागेका छन्। पहिलो चरणमा […]
निजगढमा न.पा मा ७३.७५ प्रतिशत मत खस्यो | बारामा ७२ प्रतिशत
२०७४, २१ मंसिर बिहीबार १३:५४ December 7, 2017 Nijgadh.com Comments
70 Viewsप्रदेश र प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागी तोकिएको मतदान समयावधि सकिएको छ । ५ बजेसम्म निजगढमा न.पा मा ७३.७५ प्रतिशत मत खसेको छ भने बारामा ७२ प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन कार्यालय बाराका मुख्य निर्वाचन अधिकृत प्रकाश खरेलले जानकारी दिनुभयो । ५ बजेभित्रै लाईनमा बसीसकेकाले भने मतदान गर्न पाउने खरेलले जानकारी दिनुभयो । […]
२०७४, १५ मंसिर शुक्रबार ०१:२१ December 1, 2017 Nijgadh.com Comments
107 Viewsवीरगन्ज– नेपाली कांग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वामपन्थीहरुले संविधान संशोधन गर्न नदिएको आरोप लगाउदै कांग्रेसले संविधान संसोधनको काम पूरा गर्ने बताएका छन् । वीरगन्जमा बिहीबार आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस पार्टी सधै मधेसको जनताको पार्टी रहेको दाबी गरेका छन् । बिहान ११ बजे हुने भनिएको सभामा देउवा साँझ ४ बजे […]
331 Viewsमतदाता रिझाउन सार्वजनिक विदा दिने रणनीति १४ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न समुदाय र क्षेत्रका मानिसहरुको मन जित्न र मतदातालाई रिझाउन विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । सरकारले मुस्लिम धर्मगुरुको सम्झनामा सरकारी विदा दिने र क्रिसमस डेमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय सुनाएकै दिन हेटाैंडा बजारमा सडक विस्तारसम्बन्धी अर्को निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको […]